RASMI: Claudio Ranieri oo ka tagay kooxda Nantes ee dalka France – Gool FM
(Nantes) 17 Maajo 2018. Kooxda reer france Nantes ayaa ku shaacisay website-keeda rasmiga ah in ay kala tageen macalinka reer dalka talyaaniga ee Claudio Ranieri, kadib hal sano oo kaliya uu soo hayay maamulka kooxdan.
Claudio Ranieri ayaa si wanaagsan kula bilaawday kooxda Nantes si wanaagsan, laakiin xiriirkiisa kooxda ayaa noqday mid aad u xun, kadib markii uu hoos u dhac ku yimid natiijooyinka kooxda.
Madaxweynaha kooxda Nantes Waldemar Kita ayaa ku dhawaaqay xalayto in Claudio Ranieri uu ka tagayo kooxda, maanta ayaana si rasmi ah loo xaqiijiyay.
War rasmi ah ee maanta laga soo saaray kooxd ayaa lagu yiri: “Kooxda iyo macalinka ayaa go’aansaday in ay kala tagaan kadib marka ay ku heshiiyeen”.
“Waxaan u mahadcelineynaa Claudio Ranieri iyo shaqaalaha kooxdiisa sida ay u shaqeeyeen xilli ciyaareedkan, waxaana rajeyneynaa inay ku guuleystaan mashaariicda mustaqbalka”.
Dhinaca kale Ranieri ayaa fariin uu kaga hadlayay dareenkiisa ku sheegay: “Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha ee ii ogolaaday inaan imaado Nantes isla markaana aan dib ugu soo laabtay horyaalka Ligue 1, waxaan sidoo kale doonayaa inaan mahad gaar ah u ditto jamaahiirta kooxda ee aadka u wanaagsan, iyo sidoo kale ciyaartoyda kooxda, sababtoo ah qeybta hore ee xili ciyaareedka aad ayay u fiicnaayeen, inkastoo qeybta labaad ay aad noogu adkayd”.
Mikel Arteta oo kulan la qaatay madaxda Manchester City (Muxuu ku soo dhamaaday?)